Vanyori vanobhadharwa kwazvo vegore ra2014 na2015 | Zvazvino Zvinyorwa
Vanyori vanobhadharwa kwazvo vegore ra2014 na2015
Mazuva mashoma apfuura ndakanyora yenyaya yekufunga iyo yandakatsanangura zvipingamupinyi izvo munyori aisakwanisa chete kutsikisa nevashambadzi asiwo kungokwanisa kurarama nebasa rake semunyori. Kana iwe uchida kuverenga icho chinyorwa, mune izvi link unazvo.
Nhasi tinokupa iwe chinyorwa chakapesana zvachose, nekuti tinokuunzira iwo runyorwa rwe vanyori vanobhadharwa kwazvo vegore ra2014 na2015. Kana iwe uchida kuziva kuti aya mazita ndeapi, gara nesu kuti uverenge icho chasara chinyorwa. Chokwadi pane mamwe mazita anokushamisa iwe.
Vanyori vakabhadharwa kwazvo mugore ra2014, sekureva kweForbes
Sekureva kwemagazini yeAmerican Forbes, ava ndivo vanyori vanobhadharwa zvakanyanya muna 2014:
James Patterson, ane $ 90 mamirioni: Zvichida ndiye mumwe wevanyori pane ino runyorwa uyo anonyanya kukodzera kutora chinzvimbo icho, sezvo ari mumwe wevaya vanonyanya kuchishandira. Akaburitsa mabhuku gumi nematanhatu pagore nerubatsiro rwevaanoshanda navo-vanyori, uye kubvira 16 akanyora anopfuura makumi masere enoveli. Usarega kuverenga mamwe emanovel ake ekufungidzira, iwo akanaka chaizvo! Nenzira, dzokorora chinzvimbo pane runyorwa rwevanonyanya kubhadhara vanyori muna 1976.
Dan Brown, ane $ 28 mamirioni: Aizivikanwa nekutenda kuburitswa kweimwe yevatengesi vanotengesa zvakanyanya pasirese, "Iyo Da Vinci Kodhi". Chinzvimbo chake mune vanyori vanobhadharwa kwazvo chegore 2014 chiri kukonzerwa nekutengeswa kwemamiriyoni anopfuura 1.4 emakopi ebhuku rake razvino "Inferno", chikamu chechina che «saga».
Nora Roberts, $ 23 miriyoni: Ndiani akati romance novel yaive yafa? Nora Roberts, ratidza kuti kwete. Akanyora anopfuura makumi maviri nemakumi maviri emanyorerwo erudo, uye kubva pakuonekwa kwawo, nekubudirira kwekutengesa zvakanaka. Hatizive kana nekuda kwehunhu hwayo uye / kana nekuda kwehuwandu hwemabhuku akanyorwa kusvika parizvino.
Danielle Steel, ane $ 22 miriyoni: Mumwe munyori akakurumbira wenyaya dzerudo. Pamwe chete naNora Roberts, ndivo vanyori vaviri vakazvipira ku "romanticism" vanotengesa mabhuku mazhinji emhando iyi. Iye anowanzo kuve mumwe wevamiriri vegore negore kutora iyi rondedzero ye "yakabhadharwa kwazvo" yeForbes ... Zvichava zvechimwe chinhu ...
Janet Evanovich, ane $ 20 mamirioni: Zita rake rinogona kusakuudza zvakawanda, inogona kunge iri nguva yekutanga yawakanzwa nezvomunyori uyu, asi Janet Evanovich akaverengerwa panhamba # 5 pane runyorwa rwevanyori vanobhadharwa zvakanyanya. Nyora yeutikitivha uye yerudo novel.
Jeff Kinney, ane $ 17 mamirioni: Iye ndiye munyori webhuku rakateedzana "Dhayari raGreg". Kunze kwekunyora, iye zvakare ari mugadziri wemitambo uye comic bhuku muimbi. Chaizvoizvo mugadziri wekugadzira!
Veronica Roth, ane $ 17 mamirioni: Iye ndiye munyori weimwe saga huru, "Divergent"Kunyangwe isu tisingazive kana zviri nani kuzivikanwa kubva mumabhuku kana kubva mumamuvhi. Munyori uyu anongova namakore makumi maviri nemanomwe ekuberekwa uye akatove pachinzvimbo che # 27 pane urwu runyorwa Iwe unofunga kuti ichagara mairi kwenguva yakareba here?
John Grisham, ane $ 17 mamirioni: Yakatengesa anopfuura mazana mazana maviri nemakumi mashanu emakopi pasi rese. Iye ndiye munyori wenoverengeka senge "Mutongi" o "Ivhavha".
Stephen King, ane $ 17 mamirioni: Yakasarudzika inopesana nekuuya kwemabhuku matsva. Pazvose zvinozivikanwa, munyori wekutyisa uye kufungira, anotora chinzvimbo nhamba 9 uye ave nerombo rakanaka sevamwe vazhinji veavo vambotaurwa, kuti zvinyorwa zvake zvakaendeswa kuscreen hombe. Ndiani asingayeuke "Kupenya"?
Suzanne Collins, ane $ 16 mamirioni: Mumwe munyori mukuru weimwe yakanaka trilogy: "Iyo Nzara Mitambo". Uye kunyangwe hazvo nhamba yake mukutengesa iri kuramba ichiderera, akatokwanisa kusvika pachinzvimbo pakati pevakabhadharwa zvakanyanya.
Mune ino runyorwa, munzvimbo dzinotevera, isu tine zvinotevera:
JK Rowling, nemamiriyoni gumi nemana emadhora.
George RR Martin, nemamiriyoni gumi nemana emadhora.
David Baldacci, nemamiriyoni gumi nemana emadhora.
Rick riordan, nemamiriyoni gumi nemana emadhora.
EL James, nemamiriyoni gumi nemana emadhora.
Gillian flynn, nemamiriyoni gumi nemana emadhora.
John Green, nemamiriyoni gumi nemana emadhora.
Vanyori vakabhadharwa kwazvo mugore ra2015, sekureva kweForbes
Uyezve, nenzira yekuenzanisa, iwe unozogona kuona kuti ndevapi vanyori vanga vachikwira zvinzvimbo mune iwo runyorwa mugore rimwe chete, ndevapi vanoramba vari munzvimbo imwechete, ndeapi akanyangarika uye ndeapi matsva mabatanidzwa akabatana nevane rombo rakanaka avo «Zviwane zvakanaka» Nenyika ino inoshamisa yemabhuku:
James Patterson, ane $ 89 mamirioni ramba uchitungamira.
John Green, abva pachigaro nhamba 17 kusvika kunhamba 2 gore rakatevera, uye kubva pakutambira $ 9 miriyoni muna2014 kusvika 26 mamiriyoni emadhora in 2015.
Veronica Roth, ane $ 25 mamirioni ndeimwe iyo inokwira zvigaro. Yabva pa7 kuenda pa3.
Danielle Steel, ichiri pachinzvimbo nhamba 4 nemamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora, 3 kupfuura muna 2014.
Jeff Kinney, nemamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora kuwedzera kutsva.
Janet Evanovich, ane $ 21 mamirioni, yadonhedza imwe nzvimbo pane iyi runyorwa: kubva pa5 kusvika pa6.
JK Rowling, ane $ 19 mamirioni, kwira zvinzvimbo: kubva pa11 kusvika pa7.
Stephen King, ane $ 19 mamirioni iri imwe inodzokorora mune irwo runyorwa, zvakare ichikwidza imwe nzvimbo.
Nora Roberts, ane $ 18 mamirioni, inodonha zvakanyanyisa pane iyo rondedzero, kubva 3 kusvika 9.
John Grisham, ane $ 18 mamirioni, enda pasi nzvimbo mbiri, kubva pa8 kusvika gumi.
Iwe unofungei nezve aya mazita? Unovaona vakanaka here? Iwe unofunga kuti ndiani anofanira kuva mariri gore negore?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Vanyori vanobhadharwa kwazvo vegore ra2014 na2015
Salamanca ichagamuchira yayo yekutanga inonakidza mabhuku mutambo
Rowling akatonyora script yechipiri ye "Anoshamisa Mhuka" bhaisikopo. Bhuku idzva rava kuona?